Google's Antitrust Suit bụ Harbinger nke Ike Ike maka Mgbanwe IDFA nke Apple | Martech Zone
Google's Antitrust Suit bụ Harbinger nke Ike Ike maka Mgbanwe IDFA nke Apple
Monday, November 16, 2020 Monday, November 16, 2020 Eric Grindley
Ogologo oge na-abịa, DOJ na-akwụ ụgwọ ntụkwasị obi megide Google abịarutela n'oge dị mkpa maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi, ebe ndị ahịa na-akwado nkwado nkwarụ Apple Njirimara maka ndị mgbasa ozi (IDFA) gbanwere. Ka a na-ebokwa Apple ebubo na mkpesa peeji 449 na-adịbeghị anya sitere na Houselọ Ndị Nnọchiteanya nke United States na-eji ike nke ikike ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, Tim Cook ga-eji nlezianya na-atụle usoro ya ndị ọzọ.
Ike Apple ọ ga-ejide ndị na-akpọsa ngwa ahịa ọ ga - eme ka ọ bụrụ onye na - esote teknụzụ ọzọ? Nke a bụ ajụjụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ijeri $ 80 na-atụgharị uche ugbu a.
Ka ọ dị ugbu a, Apple Inc. yiri ka ọ ga-arapara n'etiti oké nkume na ebe siri ike: o mefuola ọtụtụ nde mmadụ iji dozie onwe ha dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe nzuzo, yana n'ịzụlite nnọchi maka IDFA, nke bụworo isi nkuku nke ahaziri iche dijitalụ mgbasa ozi ruo ọtụtụ afọ. N'otu oge ahụ, iwepụ IDFA maka ịkwado usoro SkAdNetwork nke mechiri emechi, ga-eme Apple ka ọ bụrụ onye ga - abụrịrị onye na - akwado ya.
Agbanyeghị, yigharịrị IDFA na nso nso a na mbido 2021 Apple ka nwere oge iji gbanwee trajectị ya ugbu a wee zere ịgbaso nzọụkwụ Google. Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya maka nnukwu teknụzụ ịdeba okwu Google ma debe IDFA ma ọ bụ mepee SkAdNetwork n'ụzọ na-anaghị eme ka ndị mgbasa ozi dabere na data njirimara ya naanị.
Na ụdị ya ugbu a, Apple chọrọ SkAdNetwork ọ dị ka nnukwu ije karịa naanị ihe Google mere na ụlọ ọrụ ọchụchọ. Agbanyeghị na Google bụ onye kachasị egwu n'ọhịa ya, opekata mpe, enwere ndị ọzọ engines na-achọ ihe nwere ike iji ya mee ihe. N'aka nke ọzọ, IDFA na-emetụta usoro okike niile maka ndị mgbasa ozi, ndị ahịa, ndị na-eweta data data, yana ndị mmepe ngwa bụ ndị nwere obere nhọrọ karịa igwu egwu bọọlụ na Apple.
Ọ bụghị oge mbụ Apple na-eji aka elu ya amanye ahịa ahụ ime. N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ndị mmepe ngwa na-akwagide azụ megide ego gigantic 30% nke Apple sitere na ahịa niile emere na ngwa ngwa ya - nnukwu ihe mgbochi maka ego. Naanị ụlọ ọrụ na-aga nke ọma dị ka Egwuregwu Epic nwere ikike ịchụso ọgụ na nnukwu ụlọ ọrụ. Mana ọbụna Epic enwebeghị ihe ịga nke ọma n'ịmanye Apple aka.
Agbanyeghị, ugbu a, usoro ịmegide ntụkwasị obi na-aga n'ihu ga-ewe ogologo oge iji mee mgbanwe dị mma maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi. Ndị nkwusa nwere nkụda mmụọ na ikpe ikpe megide Google na-elekwasị anya na nkwekọrịta nkesa nke ụlọ ọrụ ahụ nke na-eme ka ọ bụrụ igwe nchọta ndabara mana ọ naghị edozi isi nchegbu ha gbasara omume ụlọ ọrụ na mgbasa ozi n'ịntanetị.
Dị ka otu nnyocha ndị ọchịchị UK na-eme n'oge na-adịbeghị anya si kwuo, Naanị 51 cents nke 1 dollar ọ bụla na mgbasa ozi esịmde asuanetop. Mbadamba 49 fọdụrụnụ na-abanye naanị na ntinye ntanetị. O doro anya na e nwere ihe mere ndị nkwusa ga-eji nwee nkụda mmụọ banyere ya. Ikpe DOJ na-akọwa eziokwu dị njọ nke ụlọ ọrụ anyị:
Na ịgagharị na ọgba aghara anyị mepụtara ga-abụ usoro siri ike, nwayọ, ma na-agwụ ike. Mgbe DOJ weere usoro mbu na Google, ọ nwere Apple na nlele ya. Ọ bụrụ na Apple chọrọ ịnọ n'akụkụ aka nri nke akụkọ ihe mere eme a na-eme, onye ahụ buru ibu kwesịrị ịmalite iche echiche banyere otu ọ ga - esi soro ụlọ ọrụ mgbasa ozi rụọ ọrụ kama ịnwa ịchịkwa ya.
Eric Grindley bu onye ahia ahia & ahia, onye ọka iwu, na onye guzobere & onye isi nke Mgbasa Ozi Esquire, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-eduga na otu n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi / mgbasa ozi 10 kacha elu na 2020 Inc. 5000.
Etu esi aripu ebe di elu ma weputa data site na iji mkpu Ugo SEO Spider